မူလတန်း ကျောင်းသားတွေအတွက် ရုပ်သံမှ သင်ခန်းစာတွေ ထုတ်လွှင့်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ စီစဉ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း မူလတန်း ကျောင်းသားတွေအတွက် ရုပ်သံမှ သင်ခန်းစာတွေ ထုတ်လွှင့်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ စီစဉ်
'µî±³´Â ¾ðÁ¦Âë?' (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌÁöÀº ±âÀÚ = ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) ¿©ÆÄ·Î ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇÐ»ý 540¸¸¸íÀÌ »ç»ó ÃÊÀ¯ÀÇ '¿Â¶óÀÎ °³ÇÐ'À¸·Î »õ ÇÐ³âÀ» ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÆ´Ù. °íµîÇÐ±³ 3ÇÐ³â°ú ÁßÇÐ±³ 3ÇÐ³âºÎÅÍ 4¿ù 9ÀÏ¿¡ ¿Â¶óÀÎ °³ÇÐÇÏ°í, ³ª¸ÓÁö ÇÐ³âÀº 4¿ù 16ÀÏ°ú 20ÀÏ¿¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î °³ÇÐÇØ ¿ø°Ý¼ö¾÷À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù. 31ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ÇÑ ÃÊµîÇÐ±³¿¡¼­ ÇÑ ¾î¸°ÀÌ°¡ ´ÝÇôÁø ¹®À» ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´Ù. 2020.3.31 [email protected]/2020-03-31 16:08:10/
အထူးသဖြင့် အသက် ၆ နှစ်မှ ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးများဟာ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ မိနစ် ၄၀ ခန့် ထိုင်နေဖို့ရာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့် မူလတန်း ပထမတန်းနဲ့ ဒုတိယတန်း ကလေးများအတွက် သင်ခန်းစာကို ရုပ်သံလိုင်းမှ တဆင့်ထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်နေပါတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းများကို အပြီးသတ် ရေးဆွဲပြီးနောက် လာမယ့် ဧပြီလ ၂ဝမှာ ထုတ်လွှင့်ဖို့ စီစဉ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားမှာ လိုအပ်တဲ့ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများကိုလည်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူများထံ ပေးပို့ထားပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ယခုနှစ်ရဲ့ ပညာသင်ကြားကာလကို မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် စာသင်ခန်းများကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်အသီးသီးနဲ့ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းများဟာ အွန်လိုင်းမှ စာသင်ကြားခြင်းကို ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အခု မူလတန်း ကလေးများအတွက် ရုပ်သံမှ စာသင်ကြားခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့် မူလတန်း ပထမတန်းနဲ့ ဒုတိယတန်း ကလေးများအတွက် သင်ခန်းစာကို ရုပ်သံလိုင်းမှ တဆင့်ထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်နေပါတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းများကို အပြီးသတ် ရေးဆွဲပြီးနောက် လာမယ့် ဧပြီလ ၂၀မှာ ထုတ်လွှင့်ဖို့ စီစဉ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားမှာ လိုအပ်တဲ့ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများကိုလည်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူများထံ ပေးပို့ထားပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လည်အထိ COVID-19 ကူးစက်သူ ၂၈ ဦးရှိ
Next articleထိုင်းလေဆိပ်မှာ သောင်တင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လည် ခေါ်ယူ